Tena Mino ny Fampanantenan’i Jehovah ve Ianao?
HAMAKY AMIN'NY TENY Acholi Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Aymara Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Bashkir Bassa (Cameroun) Bengali Bicol Boligara Boulou Catalan Cebuano Chichewa Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Cinghalais Cinyanja Dangme Danoà Digor Efik Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Fon Frantsay Ga Galoà Goujrati Goun Grika Guarani Géorgien Haoussa Hebreo Hiligaynon Hindi Holandey Hongroà Ibanag Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Isoko Italianina Japoney Kabiyè Kannada Kikamba Kikaonde Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Koreanina Kroaty Kurde Kurmanji (Caucase) Kurde Kurmanji (Sirilika) Kwangali Kwanyama Lamba Letonianina Lhukonzo Lingala Litoanianina Luganda Lunda Luo Luvale Malagasy Malayalam Malezianina Mambwe-Lungu Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Marathe Masedonianina Maya Mbunda Mingrelian Mixe Mongol Mooré Myama Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Norvezianina Nzema Népali Okpé Oromo Ossète Otetela Ourdou Ouzbek Pangasinan Papiamento (Curaçao) Pendjabi Persianina Pidgin (Cameroun) Pidgin Nizerianina Pidgin any Amin'ny Nosy Salomon Poloney Portogey Quechua (Bolivia) Romanianina Rosianina Runyankore Samoanina Sango Sepedi Serba Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sidama Silozi Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Swahili (Congo) Swati Tagalog Tailandey Tajiki Tamoul Tatar Tchouvache Tenin’ny Tanana Alemà Tenin’ny Tanana Amerikanina Tenin’ny Tanana Angoley Tenin’ny Tanana Aostralianina Tenin’ny Tanana Brezilianina Tenin’ny Tanana Espaniola Tenin’ny Tanana Failandey Tenin’ny Tanana Frantsay Tenin’ny Tanana Hongroà Tenin’ny Tanana Indianina Tenin’ny Tanana Indonezianina Tenin’ny Tanana Italianina Tenin’ny Tanana Japoney Tenin’ny Tanana Kolombianina Tenin’ny Tanana Koreanina Tenin’ny Tanana Meksikanina Tenin’ny Tanana Paragoayanina Tenin’ny Tanana Perovianina Tenin’ny Tanana Poloney Tenin’ny Tanana Portogey Tenin’ny Tanana Rosianina Tenin’ny Tanana Silianina Tenin’ny Tanana Sinoa Tenin’ny Tanana Venezoelianina Tenin’ny Tanan’ny avy any Arzantina Tenin’ny Tanan’ny avy any Ekoatera Tenin’ny Tanan’ny avy any Zimbabwe Tetun Dili Tigrigna Tiorka Tiv Tok Pisin Tseky Tsonga Turkmène Tuvalu Twi Tzotzil Télougou Urhobo Venda Vietnamianina Waray-Waray Wolaita Xhosa Yorobà Zandé Zapoteky (Andilan-tany) Zoloa Éwé
“Ny finoana dia fiandrasana amin-toky ny zavatra antenaina.”—HEB. 11:1.
HIRA: 81, 134
Nahoana ny mpanompon’i Jehovah fahiny no nanana finoana matanjaka foana?
Inona no omen’i Jehovah antsika mba hanatanjaka ny finoantsika?
Inona no soa ho azontsika raha matanjaka ny finoantsika?
1, 2. a) Inona no tsy itovizan’ny Kristianina sy ny olona eto amin’ity tontolo ity? b) Inona no fanontaniana lehibe hodinihintsika?
MANANTENA zavatra faran’izay tsara isika Kristianina, na voahosotra isika na “ondry hafa.” Manantena isika fa ho tanteraka ny fikasan’Andriamanitra tany am-boalohany, ary hohamasinina ny anarany. (Jaona 10:16; Mat. 6:9, 10) Izany no zavatra tsara indrindra azontsika antenaina. Efa tsy andrintsika koa ny hahazo an’ilay valisoa hoe hiaina mandrakizay, na ho anisan’ny “lanitra vaovao” isika na ho anisan’ny “tany vaovao.” (2 Pet. 3:13) Mandra-pahatongan’izany anefa, dia manantena isika hoe hitari-dalana sy hanohana ny vahoakany foana Andriamanitra.
2 Mba manana zavatra antenaina koa ny olona eto amin’ity tontolo ity. Tsy tena matoky anefa izy hoe ho tanteraka ilay izy. An-tapitrisany, ohatra, ny mpiloka manantena hahazo amin’ny loteria, nefa tsy azony antoka izany. Isika kosa tena manam-pinoana, ka ‘miandry amin-toky’ an’ireo zavatra antenaintsika. (Heb. 11:1) Inona anefa no hanampy anao hatoky kokoa fa ho tanteraka ny zavatra antenainao? Ary inona no soa ho azonao raha matanjaka ny finoanao?
3. Nahoana isika no mino an’izay lazain’Andriamanitra?
3 Tsy hoe vao teraka isika dia manana finoana. Tsy lasa manana finoana ho azy koa ny olona. Mila manaiky ny tari-dalan’ny fanahy masina isika vao hanana azy io. (Gal. 5:22) Tsy milaza ny Baiboly hoe manana na mila finoana i Jehovah. Faran’izay mahay izy sady mahery indrindra, ka tsy misy mahasakana azy tsy hahavita an’izay kasainy hatao. Tena azony antoka hoe ho vitany ny zavatra ampanantenainy, ka toy ny efa tanteraka ilay izy aminy. Izany no mahatonga azy hilaza hoe: “Efa tanteraka izany!” (Vakio ny Apokalypsy 21:3-6.) Mino izay lazainy isika satria “Andriamanitra mendri-pitokisana” izy, ka manatanteraka foana an’izay ampanantenainy.—Deot. 7:9.
TAHAFO IREO OLONA NANAM-PINOANA FAHINY
4. Inona no nantenain’ireo lehilahy sy vehivavy tsy nivadika fahiny?
4 Miresaka lehilahy sy vehivavy 16 nanam-pinoana ny Hebreo toko faha-11. Nankasitrahan’i Jehovah izy ireo sy ny olona maro hafa “satria nanam-pinoana.” (Heb. 11:39) Samy ‘niandry tamin-toky’ an’ilay ‘taranaka’ nampanantenain’i Jehovah izy ireo. Izy io mantsy no handringana ny fahavalon’Andriamanitra rehetra, ary hanatanteraka an’ilay fikasany tany am-boalohany. (Gen. 3:15) Tsy nanantena hiaina any an-danitra ireny olona tsy nivadika ireny. Efa maty mantsy izy ireny vao tonga ilay “taranaka” na i Jesosy, ary nanao zavatra mba hahafahan’ny olona ho any an-danitra. (Gal. 3:16) Hiaina ao amin’ny paradisa eto an-tany kosa izy ireny sady ho lavorary, satria tsy maintsy ho tanteraka izay ampanantenain’i Jehovah.—Sal. 37:11; Isaia 26:19; Hosea 13:14.
5, 6. Inona no nantenain’i Abrahama sy ny fianakaviany, ary nahoana izy ireo no nanana finoana matanjaka foana? (Jereo ny sary eo am-piandohan’ny lahatsoratra.)
5 Hoy ny Hebreo 11:13 momba ny mpanompon’i Jehovah fahiny: “Maty tamim-pinoana ireo rehetra ireo, na dia tsy hitany aza ny fahatanterahan’ny fampanantenana, fa tazany lavitra kosa, ka faly niandrandra izany izy ireo.” Anisan’izany i Abrahama. Nieritreritra foana izy hoe tena ho tsara ny fiainana, rehefa ilay “taranaka” nampanantenaina no ho mpitondra. Nilaza i Jesosy hoe ‘ravoravo erỳ i Abrahama noho ny fanantenana hahita’ an’izany andro izany. (Jaona 8:56) Hoatr’izany koa i Saraha, Isaka, Jakoba, ary ny olona maro hafa. Nanantena foana an’ilay Fanjakana naorin’Andriamanitra izy ireo.—Heb. 11:8-11.
6 Nahoana i Abrahama sy ny fianakaviany no nanana finoana matanjaka foana? Azo antoka fa nianatra momba an’Andriamanitra izy ireo. Nianatra momba azy avy tamin’ireo olona tsy nivadika talohany izy ireo, na namaky an’ireo asa soratra taloha ela be. Mety ho i Jehovah mihitsy koa no nampianatra azy ireo tamin’ny alalan’ny anjely na nofy na fahitana. Nitadidy an’izay nianarany izy ireo. Tena tiany koa ny fampanantenan’i Jehovah sy ny fitsipiny, ka nosaintsaininy. Lasa tena natoky izy ireo fa ho tanteraka ny zavatra nantenainy, ka tsy nivadika mihitsy na inona na inona nitranga.
7. Inona avy no omen’i Jehovah antsika mba hanatanjaka ny finoantsika, ary mila manao inona isika?
7 Nomen’i Jehovah ny Baiboly isika mba hananantsika finoana matanjaka foana. Mila mamaky azy io isan’andro àry isika, amin’izay isika ho sambatra ary ‘hahomby izay ataontsika.’ (Sal. 1:1-3; vakio ny Asan’ny Apostoly 17:11.) Mila misaintsaina ny fampanantenan’i Jehovah sy mankatò ny fitsipiny koa isika, hoatran’ny nataon’ireo mpanompony fahiny. Mampiasa “ny mpanompo mendri-pitokisana sy malina” koa i Jehovah mba hanomezana antsika sakafo ara-panahy be dia be. (Mat. 24:45) Mila mankasitraka ny zavatra ianarantsika avy amin’ireny sakafo ara-panahy ireny isika. Hanahaka an’ireo olona nanam-pinoana fahiny isika amin’izay, ka ‘hiandry amin-toky’ ny zavatra hataon’ilay Fanjakana.
8. Nahoana ny vavaka no manatanjaka ny finoantsika?
8 Nanana finoana matanjaka foana koa ny mpanompon’i Jehovah fahiny, satria nazoto nivavaka. Vao mainka nihanatanjaka ny finoan’izy ireo, rehefa hitany hoe namaly ny vavaka nataony i Jehovah. (Neh. 1:4, 11; Sal. 34:4, 15, 17; Dan. 9:19-21) Azontsika resahina amin’i Jehovah koa izay rehetra mampanahy antsika, satria mihaino antsika izy sady manome hery mba hahavitantsika hiaritra sy ho faly foana. Hihamatanjaka ny finoantsika rehefa hitantsika hoe mivaly ny vavaka nataontsika. (Vakio ny 1 Jaona 5:14, 15.) Mila ‘mangataka foana’ ny fanahy masina anefa isika, satria anisan’ny vokatry ny fanahy ny finoana. Izany mantsy no asain’i Jesosy ataontsika.—Lioka 11:9, 13.
9. Inona avy no azontsika resahina rehefa mivavaka isika?
9 Tsy mety anefa raha izay ilaintsika fotsiny no angatahintsika rehefa mivavaka isika. Azo atao koa ny misaotra sy midera an’i Jehovah isan’andro. Be dia be tsy voatanisa mantsy ny asa mahatalanjona ataony. (Sal. 40:5) Tokony hahatsiaro an’ireo “mifatotra any am-ponja” koa isika rehefa mivavaka, ka “toy ny hoe miara-mifatotra aminy.” Tokony hivavaka ho an’ny rahalahintsika eran-tany koa isika, indrindra ho an’ireo “mitarika” eo amintsika. Manohina ny fontsika ny mahita hoe mamaly an’ireny vavaka ataontsika rehetra ireny i Jehovah.—Heb. 13:3, 7.
TSY NIVADIKA MIHITSY IZY IREO
10. Iza avy ireo mpanompon’i Jehovah tsy nivadika, ary inona no nanampy azy ireo?
10 Miresaka ny fitsapana niaretan’ireo mpanompon’i Jehovah tsy nivadika ny apostoly Paoly, ao amin’ny Hebreo toko faha-11. Nisy vehivavy maty zanaka, ohatra, nefa avy eo natsangana tamin’ny maty ny zanany. Nisy olon-kafa koa “tsy nanaiky hafahana tamin’ny alalan’ny vidim-panavotana, mba hahazoany fitsanganana tsara kokoa.” (Heb. 11:35) Tsy fantatsika hoe iza no tao an-tsain’i Paoly tamin’izay. Nisy mpanompon’i Jehovah notoraham-bato anefa satria nankatò azy sy nanao ny sitrapony, anisan’izany i Nabota sy Zakaria. (1 Mpanj. 21:3, 15; 2 Tan. 24:20, 21) Tsy nivadika tamin’i Jehovah koa i Daniela sy ny namany, ka “tsy nanaiky hafahana.” Natoky izy ireo hoe homen’i Jehovah hery, ka vitany ny “nanakombona ny vavan’ny liona” sy ‘nanohitra ny herin’ny afo.’—Heb. 11:33, 34; Dan. 3:16-18, 20, 28; 6:13, 16, 21-23.
11. Inona no nanjo ny mpaminany sasany noho izy ireo nanam-pinoana?
11 ‘Niharam-pitsapana ka nesoina sy natao am-ponja’ koa ny mpaminany maro, satria nanam-pinoana. Anisan’izy ireny i Mikaia sy Jeremia. Nisy koa ‘nirenireny tany an-tany efitra sy tany an-tendrombohitra sy tany anaty lava-bato ary tany an-davaky ny biby.’ Anisan’izany i Elia. Nahavita niaritra izy rehetra ireny, satria ‘niandry tamin-toky ny zavatra nantenainy.’—Heb. 11:1, 36-38; 1 Mpanj. 18:13; 22:24-27; Jer. 20:1, 2; 28:10, 11; 32:2.
12. Iza no modely tsara indrindra ho antsika, ary inona no nanampy azy hiaritra fitsapana?
12 Niresaka momba an’i Jesosy Kristy i Paoly, rehefa avy niresaka momba an’ireo lehilahy sy vehivavy nanam-pinoana. I Jesosy no modely tsara indrindra ho antsika. Hoy ny Hebreo 12:2 momba azy: “Niaritra hazo fijaliana izy noho ilay fifaliana natao teo anoloany, ka tsy nitandro henatra, ary nipetraka teo ankavanan’ny seza fiandrianan’Andriamanitra.” Nanam-pinoana i Jesosy rehefa niatrika fitsapana faran’izay mafy. Tokony ‘handinika tsara’ ny modely nomeny àry isika. (Vakio ny Hebreo 12:3.) Novonoina ho faty hoatran’i Jesosy ny Kristianina maro tamin’ny taonjato voalohany, satria tsy nivadika tamin’i Jehovah mihitsy. Anisan’izany i Antipasy. (Apok. 2:13) Efa nandray ny valisoany izy ireny, ary tsara lavitra ilay izy raha oharina amin’ilay “fitsanganana tsara kokoa” nantenain’ireo olona nanam-pinoana fahiny. (Heb. 11:35) Taoriana kelin’ny taona 1914, rehefa lasa Mpanjaka i Jesosy, dia natsangana tamin’ny maty ireo voahosotra rehetra tsy nivadika, ary lasa fanahy any an-danitra. Hiara-manjaka amin’i Jesosy izy ireo, ka hitondra ny olombelona.—Apok. 20:4.
13, 14. Inona no fitsapana nahazo an’i Rudolf Graichen, ary inona no nanampy azy hiaritra?
13 Maro ankehitriny ny mpanompon’i Jehovah manahaka an’i Jesosy. Mitadidy foana ny fanantenany izy ireo, ary tsy avelany hihena mihitsy ny finoany. Izany, ohatra, no nataon’i Rudolf Graichen, izay teraka tany Alemaina tamin’ny 1925. Nisy sary maromaro ahitana zavatra resahin’ny Baiboly nihantona tamin’ny rindrina tao an-tranony. Hoy izy: “Nisy sary izay nahitana amboadia sy zanak’ondry, zanak’osy sy leopara, ary zanak’omby sy liona. Nifankatia tsara izy rehetra, ary ankizilahikely iray no nitarika azy ireo. ... Tadidiko foana ireny sary ireny.” (Isaia 11:6-9) Nenjehina nandritra ny taona maro i Rudolf. Nampijaly azy ny polisy miafin’ny Nazia, ary avy eo ny polisy miafin’ny Kominista. Nieritreritra an’ireny sary ireny anefa izy, ka natoky foana fa tena hisy ny paradisa eto an-tany.
14 Nisy fitsapana maro hafa koa niaretan’i Rudolf. Matin’ny areti-mifindra tany amin’ny toby fitanana tany Ravensbrück ny mamany. Nihena koa ny finoan’ny dadany, ka nanao sonia taratasy izy hoe miala tsy ho Vavolombelon’i Jehovah. Lasa mpiandraikitra ny faritra i Rudolf rehefa avy nafahana tany am-ponja. Nasaina hanao Sekolin’i Gileada koa izy. Lasa misionera tany Silia izy taorian’izay, ary lasa mpiandraikitra ny faritra indray. Nanambady anabavy misionera atao hoe Patsy izy tany, ary niteraka vavikely ry zareo. Nampalahelo anefa fa maty ilay zaza, herintaona taorian’ny mariazin’izy ireo. Maty koa i Patsy tatỳ aoriana, nefa vao 43 taona. Nahavita niaritra an’izany rehetra izany i Rudolf. Mpisava lalana maharitra sady anti-panahy izy, na dia efa antitra sy narary aza. Ao amin’ny Tilikambo Fiambenana 1 Aogositra 1997, pejy 20-25, ny tantaram-piainany. 
15. Manomeza ohatra mampiseho fa faly manompo an’i Jehovah ireo rahalahy sy anabavy, na dia enjehina aza.
15 Misy namantsika maro enjehina mafy koa amin’izao. Faly manompo an’i Jehovah foana anefa izy ireny satria manana fanantenana. Rahalahy sy anabavy an-jatony, ohatra, no migadra any Érythrée sy Singapour ary Korea Atsimo. Noho izy ireo mankatò ny didin’i Jesosy hoe tsy tokony ‘hampiasa sabatra’ no mampigadra ny ankamaroan’izy ireo. (Mat. 26:52) Anisan’izany i Isaac sy Negede ary Paulos, any Érythrée. Efa 20 taona mahery izy telo lahy no nigadra. Tsy mba afaka manambady na mikarakara ny ray aman-dreniny be taona izy ireo, sady nampijalijalina be. Tsy nivadika mihitsy anefa izy telo lahy. Hita amin’ny sariny ao amin’ny tranonkalantsika jw.org fa tsy kivy izy ireo ary matanjaka ny finoany. Na ny mpiambina aza lasa manaja azy ireo.
Miezaka hahalala an’ireo mpiara-manompo manam-pinoana ao amin’ny fiangonanao ve ianao? (Fehintsoratra 15, 16)
16. Inona no ho vokany raha matanjaka ny finoanao?
16 Tsy enjehina mafy ny ankamaroan’ny mpanompon’i Jehovah, fa fitsapana hafa no iaretany. Maro, ohatra, no mahantra, na misy ady an-trano any amin’ny taniny, na horohoron-tany, na rivo-doza, sy ny toy izany. Misy koa nanahaka an’i Abrahama, Isaka, Jakoba, ary Mosesy. Niadana be izy ireny taloha na nalaza be, nefa nahafoy an’izany. Miady mafy izy ireny mba tsy ho lasa tia vola na ho tia tena. Nahoana anefa izy ireny no faly foana manompo an’i Jehovah? Satria tiany i Jehovah sady tena mino izy fa hotanterahiny izay nampanantenainy. Fantany fa hofoanan’i Jehovah ny tsy rariny, ary hovaliany soa izay tsy mivadika ka hiaina mandrakizay ao amin’ny tontolo vaovao.—Vakio ny Salamo 37:5, 7, 9, 29.
17. Tapa-kevitra hanao inona ianao, ary inona no horesahin’ny lahatsoratra manaraka?
17 Hitantsika tato fa ny finoana dia “fiandrasana amin-toky ny zavatra antenaina.” Mila mivavaka tsy tapaka sy misaintsaina ny zavatra ampanantenain’Andriamanitra isika, raha te hanana finoana toy izany. Hahavita hiaritra fitsapana isika amin’izay. Misy zavatra hafa tokony hataon’ny olona manam-pinoana koa anefa, ary izany no horesahin’ny lahatsoratra manaraka.
^  (fehintsoratra 14) Jereo koa ny tantaram-piainan’i Andrej Hanák avy any Slovakia ao amin’ny Mifohaza! 8 Mey 2002, ao amin’ilay hoe “Tsy Nanary Toky Mihitsy Aho na dia Voasedra Mafy Aza.”